Posted by MgHla at 4:28 pm
Message posted by VIHARRI On 21 January 2005 at 9:51am
င်္ဘီကီး တင်ပေးပမြယ်ဆိုတဲ့ င်္ီသကာသ ဘုရားရဋ္ဋိခိုး င်္ိဖစ်ပတြယ် ။ဘုရားဆိုတာလူကောင်ရကီးကိုဆိုလိုတာ မဟုတ်ပဘြူး။ သိဒဍ္ဍတ္ဓဘုရင်မဋ္ဋာ င်္ိဖစ်ထ့န်းရရဋ္ဋိသ့ားတဲ့ ပု-ဒိ-အာ ဥာဏ်တော်ရကီးသုံးပြးရဲဿ အရည်အခ္လင်းင်္ိပ စကားလုံး သာ င်္ိဖစ်ပတြယ်။ ပြုရဋ္ဋား = ပုရဋ္ဋား = ဘုရား = ခေငြ်းဆောင် င်္ိဖစ်ပတြယ်။ဗုဒဍ္ဍ = သိင်္ိခင်း = အရိယသင်္စာ ၄ ပြးကို ထိုးထ့င်းသိင်္ိမင်င်္ိခင်း င်္ိဖစ်ပတြယ်။ ဂေတြမမ္လြိြး့ယ်က ဆင်းသက်မေ့းဖ့ားလာသူင်္ိဖစ်လှို ဂေတြမဗုဒဍ္ဍလှိုလည်း သုံးင်္ီက ခေငြ်္ီကပတြယ်။ ရဟန်းရကီးဂေတြမ၊ ရဋ္ဋင်ရကီးဂေတြမ စသည်င်္ိဖင့်လည်း ခေတြာတေ့ ရဋ္ဋိခဲ့ပတြယ်။ရဋ္ဋိခိုးတယ်ဆိုတာ လက်အုပ်ခ္လီတာကိုငေ်္ိပာတာ မဟုတ်ပဘြူး။ စိတ်င်္ိဖင့်္တြွတ်ကိုင်း၍ လေးစားသမ႙င်္ိပငြ်္ိခင်းသာ င်္ိဖစ်ပတြယ်။ ဒြ့ငေ်္ီကာင့် ဘုရားရဋ္ဋိခိုးတယ်ဆိုတာ လူကောင်ရကီး (သှို)ြုပ်ပ့ားတော်တေ့ကို လက်အုပ်ခ္လီတဲ့အလုပ် လုပ်တာနှဲတင် မနပီးပဘြူး။ လူကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ လူပေမြဋ္ဋာလည်နေတဲ့ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲကနေ လ့တ်ငေ်္ိမာက်ခ္လမ်းသာနည်းကိုပေးသူ၊ လ့တ်ငေ်္ိမာက်စေသူ ဆရာသမား ခေငြ်းဆောင် င်္ိဖစ်သူကို အလေးင်္အိမတ်င်္ိပနြပီး သှူရဲဿ သင်င်္ီကားခ္လက်တေ့ကို လိုက်နာက္လင့်သုံးတာကိုမဋ္ဋ ဘုရားရဋ္ဋိခိုးင်္ိခင်းအစစ်လှို ငေ်္ိပာခ္လင်ပတြယ်။ ဘုရားက သှူကို အာမိသပူဇာဆိုတဲ့ ၀တ္ဓြ ပင်္စည်းတေ့နှဲ ရဋ္ဋိခိုးပူဇော်တာထက် ဓမ္ထပူဇာဆိုတဲ့ အက္လင့်င်္ိမတ်နှဲ ပူဇော်တာကို ပိုနပီး ခ္လီးမ့မ်းပတြယ်။ ဒီ့င်္အိပင် လူကောင်ရကီးကို င်္ီကည်ညိပြူဇော်နေတဲ့ ၀က္ကလိဆိုတဲ့ ရဟန်းတပြးကို င်္အိပင်းအထန် ရ႙တ်ခ္လငေ်္ိပာဆိုခဲ့တဲ့ သာဓကရဋ္ဋိပတြယ်။အကောင်းဆုံး ဘုရားရဋ္ဋိခိုးနည်းဟာ င်္ီသကာသ ကန်တော့ခ္လြိး င်္ိဖစ်ပတြယ်။ ဒပြေမယ့် ဒီနှေ ဗုဒဍ္ဍဘာသာဝင်တေ့ နားလည်နေတဲ့ အဓိပ္ဏာယ်မ္လြိးတော့ မဟုတ်ပဘြူး။‘‘ခ့င့်င်္ိပပြဘြုရား၊ ခ့င့်င်္ိပပြဘြုရား ခ့င့်င်္ိပပြဘြုရား။ တပည့်တော်သည် ကာယကံ မဋ္ဋား၊ ၀စီကံမဋ္ဋား၊ မနောကံမဋ္ဋားတှိုင်္ိဖင့်င်္ိပမြိသော ခပ်သိမ်းသောင်္အိပစ်တှိုကို ပ္လောက်ပစြေ င်္ိခင်း အက္လြိးငဋ္ဋာ အရဋ္ဋင်ဘုရားဟောင်္ီကားတော်မူခဲ့သော တရားမ္လားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဟောင်္ီကားင်္ီကသောသံဃာတော် အရဋ္ဋင်သူင်္ိမတ်မ္လား၏အဆုံးအမအတိုင်းအလေးထားနပီး လိုက်နာက္လင့်သုံးကာ နောက်ထပ်င်္မိပမြိအောင်ကံအမဋ္ဋားမ္လားကိုဝေးရာသှိုအရကိမ်ရကိမ် ကန်ပစ်တော့ပစ်ပမြည်ဘုရား။ဤသှိုကန်ပစ်တော့ပစ်င်္ိခင်းင်္ိဖင့် ခ္လမ်းသာကင်းသူင်္အိဖစ် ၄မ္လြိး၊ ဒုက္ခရောက်သူင်္အိဖစ် ၃ မ္လြိး၊ စ့န်ှပယ်အပ်သော အရပ်၈မ္လြိး၊ရန်သူ၅မ္လြိး၊ဖောက်လဲ့ဖေက်ြင်္ိပန်င်္ိဖစ်မ႙ ၄ မ္လြိး၊ ပ္လက်စီးဆုံြး႙ံးင်္ိခင်း ၅မ္လြိးတှိုမဋ္ဋကင်းလ့တ်နပီးလှူင်လ့တ်ငေ်္ိမာက်နငိမ်းခ္လမ်းစ့ာင်္ိဖင့် လောကကိုစောင့်ရေဋ္ဋာက်ြိုင်သူင်္ိဖစ်အောင် ရကြိးစားနေပသြည် အရဋ္ဋင်ဘုရား။’’ဒီလို ဘုရားကို စိတ်္တြွတ်နပီး၊ အော်တိုဆပ်ဂ္လက်ရဋ္ဋင်းနည်းနှဲ တိုင်တည် ရဋ္ဋိခိုးတာ ဟာ အကောင်းဆုံးဘုရားရဋ္ဋိခိုးလှို ငေ်္ိပာခ္လင်ပတြယ်။ ဒီအထဲမဋ္ဋာ ရရဋ္ဋိမည့် အက္လြိးတရား တေ့ရော၊ ထားရမည့်စိတ်ထားတေ့ရော၊ လက်တှေ့လိုက်နာဆောင်ရ့က်နည်းတေ့ရော အစုံအစေ့ ပရြဋ္ဋိနေပတြယ် တူမောင်တူမမ္လားတှိုရေ။
-------------------------------------------------------------------------------------------------ဒီနေ.ဗုဒဍ္ဍဘာသာဝင်တေ့ င်္ီသကာသဘုရားရဋ္ဋိခိုးနဲ့ ရဋ္ဋိခိုးင်္နေီကပေမယ်လိုဿ အဓိပ္ဏယ်ြင်္ိပည့်င်္ိပည့်၀၀သိင်္ိပီး ရဋ္ဋိခိုးင်္နေီကသူ ရဋ္ဋားပတြယ်။င်္ီသကာသရဲဿ င်္ိမန်မာင်္ိပန်ကိုတောင် သိသူနည်းပလြိမ့်မယ်။ ခ့င့်င်္ိပပြဘြုရားလိုဿ ငေ်္ိပာတာ ပြ ... ဆိုသူတေ့တောင် ဆက်မေးင်္ီကည့်ရင် လည်ထ့က်ကုန်ြိုင်ပတြယ်။ ဘုန်းင်္ီကီးဆီက ခ့င့်တောင်းတာတော့ ထားပတြော.။ ရုပ်ပ့ားတော်ဆီက ခ့င့်င်္ိပခ္လြက် တောင်းတယ်ဆိုရင် တစ်မ္လြိး င်္ိဖစ်သ့ားပမြယ်။ ရုပ်ပ့ားတော်က ခ့င့်င်္ိပမြဋ္ဋာလား ၊ ခ့င့် င်္ိပတြတ်လိုဿလား....စသည်င်္ိဖင့် ဆက်မေးလာရင် ငေ်္ိဖြိုင်ဖိုဿ မလ့ယ်တော့ပဘြူး။ ဘုရားရဋ္ဋင်ကို ရည်မဋ္ဋန်းခ့င့်တောင်းရင်း အော်တိုဆပ်ဂ္လက်ရဋ္ဋင်း လုပ်တာလိုဿ သိထားရပမြယ်။ကာယကံ ၀စီကံ မနောကံ သဗ္တဒေသြ ခပ်သိမ်းသော င်္အိပစ်တိုဿကို ...လိုဿ ဆက်ရဋ္ဋိခိုးနေပေမယ်လိုဿ ကံတေ့ကိုလည်း အသေအခ္လာမသိ ၊ ကံအားလုံးက င်္အိပစ်င်္ိဖစ်မဋ္ဋာလားလဲမသိ ၊ င်္ိဖစ်နေတတ်ပတြယ်။ ဒီနေရာမဋ္ဋာ ဒေသြရဲဿ အနက်ပေးပုံဟာ သတိင်္ိပစြရာပြ။ င်္အိပစ်င်္ိဖစ်စေတာ သူတပြးကို ထိခိုက်စေတာကို ဆိုလိုတာ ထင်ရဋ္ဋားပတြယ်။ြိုဿဆာလိုဿ ကလေးငိုတာ ဒေသြ ဟုတ်မဟုတ် စဉ်းစားတတ်ဖိုဿပြ။
ကိုယ်ရဋ္ဋိခိုးနေတဲ့စကားလုံးတေ့ရဲဿ အနက်ဖ့င့်အမဋ္ဋန်ကို မသိပဲ ရဋ္ဋိခိုးင်္နေီကတာဟာင်္ိဖင့် ဘုရားရဋ္ဋင် ပေးလိုတဲ့ လ့တ်ငေ်္ိမာက်င်္ိငိမ်းခ္လမ်းမ႙ဆီ ရောက်ြိုင်စရာ မရဋ္ဋိသလောက်ပပြဲ။
ရန်သူမ္လြိး ၅ ပြး အဖ့င်ဿလည်း ပိုင်ပိုင်နဲဿ အတော် ဆေ့ြးေ့းင်္ိပခဲ့င်္ိပီးပငြ်္ိပီ။ ဘရကီးရဲဿင်္အိမင်မဋ္ဋာ ရေ မီး မင်း ခိုးသူ မခ္လစ်မဋ္ဋြစ်သက်သောသူတေ့ဟာ ဘုရားဆိုလိုခ္လင်တဲ့ ရန်သူမ္လြိး ၅ ပြး င်္မိဖစ်တန်ရာပဘြူး။ ဒီလိုပဲ င်္တိခားရန်သူမ္လြိးတေ့ ဘာလိုဿ မပတြာတုန်းဆိုရင် ငေ်္ိဖဖိုဿ ခက်သ့ားပလြိမ့်မယ်။ ဥပဒြနြက္ခဍ္ဍြာ ၅ ပြး ကမဋ္ဋ လူအားလုံးအတ့က် ရန်သူအစစ် င်္ိဖစ်ပတြယ်။ ဒုက္ခကို ဘုရား အဋ္ဋြစ်ခ္လပ်ြင်္ိပခဲ့တာက သံခိတ္ဒေန ပဥင်္ပြဒြနြက္ခဍ္ဍြာ ဒုက္ခာ င်္ိဖစ်တဲ့အတ့က် ရန်သူအစစ် င်္ိဖစ်ရတာပြ။
ပဥင်္က္ခဍ္ဍြာနဲ့ ပဥင်္ပြဒြနြက္ခဍ္ဍြာ အတူတူ ယူလိုက်မိရင်တောဿ ကိုယ်ဿကိုယ်နဲဿ ကိုယ် ရန်င်္ိဖစ်ကုန်င်္ီင်္ကိပန်ပတြော့တယ်။
တရားစကားတေ့နဲဿ ပတ်သက်လိုဿ ဘာဝနာမယ င်္ိဖစ်သည်ထိ စီစစ်တတ်င်္ီကပစြေ ။ စီစစ်ြိုင်င်္ီကပစြေ ..... လိုဿ င်္ဘီကီး တိုက်တ့န်းရင်း ဆ္ဌြင်္ိပလြိုက်ပတြယ်။
Thank you so much..really nice explanation! Could you post more detail about five enemies( ပဥင်္ပြဒြနြက္ခဍ္ဍြာ )? I really want to know what are ပဥင်္ပြဒြနြက္ခဍ္ဍြာ ?
Bro I m also trying to using Myanmar Unicode
I've already installed fonts kb layout and patch it already. But It doesnt work well.
I've installed all unicode fonts in my fonts folder and system 32.
တကယ်ဟုတ်ရဲဿလား ဓာတ်ခဲမလိုတဲ့ ဓာတ်မီးရယ်
PonNya Myanmar Unicode Font
Message posted by VIHARRI On 21 January 2005 at 9:...
မောင်လဋ္ဋရဲဿ အမုန်းစာရင်း - ၁င်္ိမန်မာ ပိုက်ဆံ က္လပ် ၁၀...
commentမဋ္ဋာ င်္ိမန်မာလို ရိုက်လိုဿ ရအောင် စမ်းနေတယ် .....